သမုဒ္ဒရာ MAGIC Prize Draw စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ |
သမုဒ္ဒရာ MAGIC Prize Draw စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
ဒီမြှင့်တင်ရေးအကြားတက်ကြွဖြစ်လိမ့်မည် 00:01 16/11/2017 နှင့် 23:59 22/11/2017.
ဒီမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်ခြေစစ်ပွဲဂိမ်းသမုဒ္ဒရာကို Magic ဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါစုစုပေါင်းဆု£ 3000 ငွေသားဖြစ်လိမ့်မည်နှင့် 2000 ဆုကြေးငွေလှည့်ခြင်းများ.
2ကြိမ်မြောက် – 5ကြိမ်မြောက် £ 125
6-15ကြိမ်မြောက် £ 50 ဦး
16ကြိမ်မြောက် – 35ကြိမ်မြောက် £ 25
36st – 100ကြိမ်မြောက် 20 လှည့်ခြင်းများ
101ကြိမ်မြောက် – 150ကြိမ်မြောက် 10 လှည့်ခြင်းများ
151st – 200ကြိမ်မြောက်4လှည့်ခြင်းများ
အဆိုပါအနိုင်ရအကောင့်ကျပန်းရွေးချယ်တော်မူလိမ့်မည်, အဆိုပါမဲနှိုက်သို့အရည်အချင်းပြည့်မီကြသူကစားသမားများအနေဖြင့်. ကစားသူတစ်ဦးကိုထုတ်ပေးပိုမို entries တွေကို, သာ. အနိုင်ရအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖြစ်လာ.
ကစားသမားသမုဒ္ဒရာကို Magic slot ကဂိမ်းအပေါ်အကူတိုင်များစိုက်ထူတိုင်း£ 20 ငွေသားအဘို့တယောက်မဲနှိုက် entry ကိုချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်
တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းကစားသမားတစ်ချိန်ကသာအနိုင်ရခွင့်. ကစားသမားနှစ်ကြိမ်ရေးဆွဲလျှင်, ပိုမိုမြင့်မားသောတန်ဖိုးရှိဆုအလိုအလြောကျချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်, နှင့်တစ်ဦးပြန်လည်မဲနှိုက်ကောက်ယူပါလိမ့်မည်.
ငွေသားကစားသမားအနိုင်ရရှိမှုအတွင်းရှိဆုကိုလက်ခံရပါမည် 48 အဆိုပါမြှင့်တင်ရေးအဆုံးသည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်နာရီ, သူတို့ရဲ့အကောင့်အတွက် logging အားဖြင့်
အပိုဆုလှည့်ဖျားအတွင်းမှာထည့်သွင်းပါလိမ့်မည် 72 မြှင့်တင်ခြင်း၏အဆုံးအပြီးနာရီ.
၏အာမခံလိုအပ်ချက်များကို 30 ဆုကြေးငွေငွေသားမှပြောင်းပေးနှင့်မဆိုသက်ဆိုင်ရာအနိုင်ရရှိတဲ့ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်ရှေ့တော်၌ထိုဆုကြေးငွေပမာဏကိုလျှောက်ထား x.
ယေဘုယျ စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ လျှောက်ထား. စီမံခန့်ခွဲမှုဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကိစ္စများတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်.
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ Baywatch Prize ကို Draw